Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPhone in ay iPad iyo All kale Files
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPhone in ay iPad iyo All kale Files - ka Solutions Best halkan
Apple qaar ka mid ah technology ugu horumarsan helay maanta oo iPhone iyo iPad ka mid ah qalabka ugu wanaagsan oo ay heshay dhammaan muuqaalada farsamada ugu dambeeyey yihiin. Sababtoo ah isticmaalka iyo nooc oo kala duwan isticmaala badan ayaa helay labada iPhone iyo iPad iyo sidaas ay u baahan yihiin howlan files ay labada qalabka si ay u isticmaali karaan faylasha kuwa ka mid ah kuwa qalabka ay doonayaan. Laakiin dadka isticmaala badan ma yaqaanaan sida ay ku yeelan karaan kuwa files on iPhone fudud loo heli karo oo ay iPad iyo sidoo. Halkan this article, waxaana idin tusin doonaa faahfaahin ku saabsan sawiro kala iibsiga ka iPhone in iPad ee qaybta hore iyo sidoo kale faylasha kale sida music, videos, xiriirada ka iPhone in iPad in ay qeyb ka tip labaad.
Qeybta 1: Saxiixa Photos ka iPhone in iPad
Qeybta 2: Talooyin si ay u gudbiyaan Music, Videos, Xiriirada iyo Qaar kale oo ka iPhone in iPad
Photos ka iPhone in iPad loo gudbin karaa iyadoo la isticmaalayo Wondershare MobileTrans, Photo Stream iyo Transfer Wireless App. Iyo Wondershare MobileTrans noqon doonaan habka ugu fudud ee uu u gudan karo iyo waxa ay sidoo kale si fudud u wareejin karaan faylasha kale sida music, video, xiriirada iyo dadka kale.
# Xalka 1: Wondershare MobileTrans
Tallaabooyinka hoos ayaa looga hadlay saxiixa sawir ka iPhone in iPad isticmaalaya Wondershare MobileTrans in habka ugu fudud ee la hal click. First ee ha wixii Wondershare MobileTrans yahay iyo waxa aan samayn karo.
Bedelka Photos ka iPhone in iPad, si fudud oo waxtar leh!
Photos Bedelka ka iPhone in iPad iyadoo hal click oo si deg deg ah
Ma aha oo kaliya sawiro. Waxaad u isticmaali kartaa si ay u gudbiyaan dhammaan faylasha kale sida xiriirada, barnaamijyadooda, fariimaha, jadwalka taariikhda, music, video iyo in ka badan.
Qalab ugu fiican si loo maareeyo arrimo aad qalabka hal meel
Fiiro gaar ah: waxaa loogu talagalay dadka isticmaala Windows. Haddii aad isticmaalayso Mac, waxaad u tagi kartaa si Wondershare MobileTrans u Mac si ay u caawiyaan.
Hadda, bal aynu u yimaadeen inay tallaabooyin faahfaahsan.
Talaabada 1: Waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo iyo rakibi Wondershare MobileTrans on your computer. Waxaa Launch oo waxaad arki doontaa suuqa kala aasaasiga ah ee barnaamijka muuqday sida soo socota.
Talaabada 2: labadaba aad iPhone iyo iPad Connect si aad u computer. Hubi in computer iyaga si sax ah regonize karo, ama iyagoon la ogaan barnaamijka.
Talaabada 3: Guji "Phone in Phone Trannsfer" on screenshoot ee kor ku xusan. Markaasay aad arki doonaa in labada aad iPhone iyo iPad waxaa lagu soo bandhigaa suuqa kala barnaamijka. Si sawiro ka iPhone wareejiyo iPad, waxaad u baahan tahay meel iPhone dhinaca bidix, oo wuxuu ku yidhi "Source", iyo iPad dhinaca midig iyadaa, sida hoos ku qoran.
Talaabada 4 : sawiro beddelashada ka iPhone in iPad noqon doonaa mid aad u fudud ka dibna. Sax checkbox ee photos oo guji "Start Copy". Haddaba bilowday wareejinta. Waxaad u baahan kartaa in ay sugto mararka qaar inta aanu dhicin tan iyo sawiro aad sida caadiga ah xiriirada ama faylasha text kale meel dheeraad ah qaar ka mid ah markaas.
Waxa kale oo aad dooran kartaa checkboxes of badan oo files kale sida SMS, barnaamijyadooda, music, videos iyo in ka badan.
Halkan waa sida aad sawiro ka iPhone in iPad wareejin karaa Photo Stream .
Talaabada 1: Marka hore hubi in aad saxiixay in aad xisaabta gaar ah ee iCloud labada iPhone iyo iPad la ID isla Apple. Waxaad ID kartaan shaqabaq Apple ka https://appleid.apple.com/
Hadda waxaad u baahan tahay inaad soo celi On My Photo Stream aad iPhone. Eeg on image hoose taas oo muujinaysa Jooji ah
Talaabada 2: Raac tallaabooyinka sida ku cad image kor ku xusan. Open Settings markaas furan iCloud ka dib in la xusho Photos ka dibna waxaad ka heli doontaa screen kale ee aad u baahan doontaa in shid My Photo Stream .
Talaabada 3: Hadda, aad iPad sameeyo waxa soo socda sida ku cad image below-
Sida ku cad image kor ku xusan, Riix Photos ka dibna dooro Photos iyo waxaa ay doortaan Qaasaali halka aad ka heli doonaa My Photo Stream folder. Haddaba waad arki doontaa oo dhan sawiro iPhone yihiin synced in aad iPad.
#Solution 3: Transfer Wireless App
Talaabooyinka waa la wada hadlay hoose kala iibsiga sawir ka iPhone in iPad isticmaalaya Transfer Wireless App -
Talaabada 1: Ugu download hore iyo rakibi Transfer Wireless App labada iPhone iyo iPad.
Xusuusnow, waa in aad ku xidhan labada iPhone iyo iPad shabakad wifi isla dhigno mid shaqeysa.
Talaabada 2: Hadda Run Transfer Wireless App labada iPhone iyo iPad.
Talaabada 3: Hadda Tubada dir Button shaashadda telefoonka iyo daaha cusub sida image dhinaca midig ka muuqan doontaa.
Waxaad ka heli doontaa 'Computer' laba fursadaha & 'iPod iPhone iPad' shaashadda meesha aad inaan garaac mid dambe.
Talaabada 4: Hadda ka furmo suuqa cusub doortaan sawiro iyo videos aad rabto in aad u soo dirto
Hormariyo button Send on iyo sawiro iyo videos la lagu dari doonaa si aad iCloud.
Talaabada 5: Hadda on your iPad ee Transfer Wireless App screen qasabadda ku Device Refresh ka dibna waxaad arki doontaa qalab laga heli karo. Tubada ku helo ka iPhone / iPad / iPod oo ku weydiin doonaa Oggolaanshaha aad iPhone iyo marka aad aqbasho, sawiro iyo videos aad waxaa loo wareejin doonaa ka iPhone in aad iPad.
1 Transfer xiriirada ka iPhone in iPad
Waxaad si fudud u ka iPhone wareejin karaan xiriirada si aad iPad iyo in aad u baahan tahay in aad qaadato gargaar ah server xisbiga 3aad sida iCloud, Gmail iwm Halkan yihiin dariiqooyinka loo wareejiyo xiriir la isticmaalayo iCloud waxaa looga hadlay below- Dabcan, Wondershare MobileTrans noqon doonaa fudud Jidka in faylasha aad wareejin ka mid ah sida ka muuqata kor ku xusan .
Talaabada 1: Marka hore maraan si Settings aad iPhone oo waxaad ka heli doontaa fursado sida ku cad image ee dhanka midig. Laga soo bilaabo liiska aad u baahan tahay inay hesho on iCloud oo cusub-menu sub muuqan doonaa.
Menu wuxuu noqon doonaa sida image dhinaca midig halka aad saxiixdo in ay u xisaab email oo aad loo isticmaalo in lagu diiwaan iCloud. Hadda sida aad ku arki meesha calaamadeysan sanamkii, noqon button soo socda si Xiriirada ka baxsan si ay On
Talaabada 2: ka dib lagu weydiin doonaa inaad la laba doorasho Marge iyo Cancel. Waxaad heli doontaa inay hesho Marge iyo iCloud diyaar u ah inay syncing xiriirada noqon doonaa.
Talaabada 3: Hadda dib ugu soo xiriiro oo isqabooji, iyo xiriirada oo dhan la synced doonaa iCloud.
Talaabada 4: Hadda on your iPad, falgali in goobaha iyo saxiixa ku yo account email isku dadaalkii aad loo isticmaalo iPhone. Marka aad samayn in ka dibna dhammaan xiriirada aad noqon doontaa iPad iyo sidoo.
2 Transfer iibsaday Music Video iyo ka iPhone in iPad
Waxaad sidoo kale ku wareejin karaa music aad iibsatay ka iPhone in aad iPad aad si fudud u isticmaalay Lugood. Mar kale, wareejinta music iyo video ka iPhone in iPad noqon doonaa mid aad u fudud iyadoo la kaashanayo Wondershare MobileTrans . Waa in Hubi hordhaca ah ee kor ku xusan .
Talaabada 1: Ugu download hore iyo rakibi Lugood aad PC / Mac http://www.apple.com/itunes/download/ .
Talaabada 2: Hadda xiriiriyaan iPhone in aad PC isticmaalaya cable USB ah. Hadda Lugood furan pc iyo dooro Store ka fursadaha iyo aad arki doonaa shaashadda ka dibna dooro awood u Computer halkaas oo ay ku weydiin doonaa inaad geli Apple Id iyo dib u riix fasaxayaa iyo qalab aad la oggolaan doonaa.
Talaabada 3: Hadda dooro qalab aad ku Lugood ka liiska Device ka dibna dooro Iibsasho Transfer markaas oo dhan music iyo videos iibsaday waxaa loo wareejin doonaa qalabka idman.
Talaabada 4: muuqdey in dib markii iPhone iyo iPad xirmaan ka dibna riix download iibsaday music liiska iyo music oo dhan aad la soo bixi doonaa iPad. Talaabadani waxay ku wareejin doonaa oo kaliya aad soo iibsatay music laakiin kan kale ma aad soo guuriyeen in qalab aad.
Si aad u wareejin music aad soo guuriyeen, waxaad u leedahay in in uu saxiixo iyo awood u qalabka sida hore muujiyey. Markaasaad arki doonaa shaashadda sida image ku dhinac midig. On Media dooro Music .
Screen A cusub muuqan doonaa sida image ku cad below-
On liiska hoos qalab doorasho guji Music Library iyo waxaad arki doontaa music qalabka dhan ee lagu shubto doonaa shaashadda. Hadda dooro music gaar ah aad dooneyso in aad wareejiso ama ay doortaan oo dhan haddii aad rabto oo dhan music in lagu wareejiyo ka iPhone.
Hadda ka dib xulashada, guji Transfer loo doortay in ay Lugood sida ku cad image kor ku xusan iyo music oo dhanna waxaa loo wareejin doonaa maktabadda Lugood ah.
Hadda barkinta aad iPhone ka PC iyo xiriiriyaan iPad in PC iyo aad magacaaga qalab shaashadda Lugood arki doonaan.
Hadda dooro Gacanta Maamul Music Videos iyo shaashadda ka dibna riix codso .
Haddaba waad arki doontaa shaashad sida hoos meesha aad yeelan doontaa in ay doortaan muujiyey On Phone Tani .
Hadda riix Music ama videos dhinaca bidix ee shaashadda. Hadda jiid jeedi oo dhan music iyo videos maktabadda Lugood si aad iPad.
Ka dib markii in, haddii aad music furan ama videos folder, waxaad arki doontaa videos music oo dhan waxaa jiri doona on your iPad oo aad wareejiyo.
3 Transfer Files (DOC, TXT, iwm) ka iPhone in iPad
Waxaad sidoo kale ku wareejin karaan faylasha sida DOC, TXT, iwm ka iPhone in iPad isticmaalaya file sharing Lugood. Laakiin si ay u sameeyaan in, waxaad u baahan doontaa inay u dhoofiyaan faylasha aad si aad PC hore ka iPhone oo markaas dajiyaan kuwa si ​​aad iPad ka PC. Wondershare MobileTrans sidoo kale samayn kartaa in aad sahal iyo ka wax dhibaato ah. Soo hubi ka kor ku xusan .
Sharaxaad faahfaahsan oo la siiyey below-
Dhoofinta dokumenti aad PC
Talaabada 1: Marka hore furo Lugood aad kombuutarka iyo xiriiriyaan iPhone in aad PC dooro qalab aad liiska qalabka suuqa kala Lugood oo hore ayaa lagu muujiyay.
Talaabada 2: Hadda fur dokumentiga aad rabto in aad dhoofin iyo tubbada icon toolbar sida ku cad xaq image ka ​​Share & Print liiska tuubada.
Talaabada 3: Waxaad ka heli doontaa screen kale sida aad ka arki on image hoose. Dooro Copy in Lugood ka mid ah liiska.
Talaabada 4: Hadda daaqad cusub muuqan doonaa sida aad ka arki on image ku below-
Isticmaal fursadaha in ay doortaan noocyada file ka dibna jiid & rid faylasha aad ka iPhone in aad PC.
Talaabada 5: Hadda barkinta aad iPhone iyo iPad xidhi aad si aad PC. Fur Lugood dooro qalab aad. Markaas jiid & rid faylasha maktabada Lugood aad si aad iPad iyo DOC, TXT iwm files diyaar u noqon doona isticmaalka on your iPad iyo sidoo.
10 Songs LOL u qosol badan in aad dareentid Like A Boss
Solutions in dayactir iPhone ma soo celin doonaa Dhibaatooyinka
Bedelka Xiriirada ka iPhone in Moto X 1 Click
[Issue go'an] iPhone ku xayiran garoonka Logo Apple ee Screen
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPhone in ay iPad iyo All kale Files